စစ်တပ်က အဓမ္မ သိမ်းထားသည့် မြေယာများ ပြန်ရနိုင်ခြေ နည်းပါး | ဧရာဝတီ
စစ်တပ်က အဓမ္မ သိမ်းထားသည့် မြေယာများ ပြန်ရနိုင်ခြေ နည်းပါး
ခင်ဦးသာ| January 31, 2013 | Hits:2,910
1 | | အစိုးရစစ်တပ်က အဓမ္မသိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာမြေများကို မူလပိုင်ရှင် လယ်သမားများ ပြန်လည်ရရှိရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းတွင် တပ်မြေအဖြစ် သိမ်းရန် ကျောက်တိုင် စိုက်ထူထားသော ပင်ငိုကျေးရွာ တောင်ယာဧက ၆၁၀ ဧကမှ တနေရာ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
“စစ်တပ်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တာပဲသိမ်းဖို့ ကာချုပ် (တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်) က ညွှန်ထားတယ်။ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေ တွေဟာလည်းပဲ လိုအပ်လို့ သိမ်းထားတယ် ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ စစ်တပ်က ပြန်ရှင်းပြတယ်၊ အဲဒီတော့ မလိုအပ်ဘဲ သိမ်းထားတာတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ဖြေရှင်းပေးမလဲလို့ မေးတဲ့ အခါ ကာချုပ်ဆီကို တင်ပြရဦးမှာပဲပြောတော့ လယ်သမားတွေ လက်ထဲ ပြန်ရောက်ဖို့တော့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းတဲ့သဘောပါ” ဟု လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှ လယ်ယာမြေများ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၊ နွားစားကျက်မြေများကို စစ်တပ်၊ ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက သိမ်းယူထားသည့်အတွက် တိုင်ကြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုလုပ်သော လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစည်းအဝေး၌ ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား တက်ရောက် ဖြေကြား ရှင်းလင်းခဲ့သူ တွဲဖက်စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မင်းနိုင်က အဆိုပါအတိုင်း ဖြေဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လယ်ယာမြေ ကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၌ ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ စတင်ကျင်းပနေရာ လယ်မြေသိမ်းယူထား၍ တိုင်ကြားခံထားရသည့် ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၊ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနဌာတို့က ကနဦး လာရောက် ရှင်းလင်းဖြေကြားကာ ကုမ္ပဏီများကလည်း ဆက်လက် ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တနိုင်ငံလုံးမှ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ဧက ထောင်ပေါင်းများစွာကို စစ်တပ်နှင့် ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက အဓမ္မ သိမ်းယူထားခြင်းကြောင့် တိုင်ကြားမှုများကို လွှတ်တော်အသီးသီးမှ စုံးစမ်ရေး ကော်မတီ ၉ ခုက ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် စစ်ဆေးကြရာ စစ်တပ်က သိမ်းထားသည့်အမှုသည် အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုး က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ မွန်ပြည်နယ်မှာ ဆိုရင်လည်း စစ်တပ်သိမ်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေ၊ ရာဘာခင်းတွေ ဧကပေါင်း များစွာရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေကို တိုင်နေကြပေမယ့် အရေးယူတာတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ စစ်တပ်အပေါ် တိုင်ကြားထားမှုသည် ၄၀၀ ကျော်ရှိပြီး အမှု ၄၀ ၀န်းကျင်ကိုသာ စစ်တပ်အနေဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသေးကြောင်း၊ အမှုပေါင်း ထောင်ချီရှိနေသေး၍ ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တပ်က လယ်မြေသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ညွှန်ကြားထားရာတွင် စစ်တပ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် သိမ်းယူထားသည့် လယ်မြေများသည် အမှန်တကယ် အသုံးပြုမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန်နှင့် တပ်ရင်းတခုအတွက် လိုအပ်သည့်မြေ အတိအကျကိုသာ သိမ်းယူရန်တို့ကို လမ်းညွှန်ထားသည်ဟု ဗိုလ်ချုပ် မင်းနိုင်က ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ထို့အတူ စစ်တပ်အနေဖြင့် သိမ်းယူထားသည့် လယ်မြေများကို ပိုင်ရှင် လယ်သမားများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရာတွင်လည်း သီးစားခမယူဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လမ်းညွှန်ထားကြောင်း၊ သီးစားခဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသည့် တပ်ရင်းများမှ တပ်မှူးတချို့ကို ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ် မင်းနိုင်က ပြောကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ် မင်းနိုင်က ထိုသို့ ပြောဆိုနေသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်တော်၊ မြေပုံ၊ ပေါက်တော စသည့် မြို့နယ်များတွင် သိမ်းယူထားသည့် လယ်မြေများအား ပိုင်ရှင်လယ်သမားများကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းများက သီးစားခစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ ရှိနေပြီး ယနေ့အထိလည်း လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
“လယ်သမားတွေကို သီးစားချတဲ့အခါမှာ အရင်ကဆိုရင် တဧကကို စပါး ၅ တင်းပေးရတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စပြီးတော့ ၁၅ တင်းစီ ပေးရတယ်။ သီးစားခ မပေးနိုင်သူ လယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးဘူးလို့ စစ်တပ်က ခြိမ်းခြောက်တော့ ရတဲ့စပါး သူတို့ပဲ ပေးရတာပေါ့။ တခါတလေမှာ ကိုယ်စားဖို့ မကျန်တဲ့အပြင် စိုက်ပျိုးစရိတ်လည်း ရှုံးတယ်” ဟု ကျောက်တော် ဒေသခံ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
စစ်တပ်၏ အဓမ္မ လယ်မြေသိမ်းမှု အများဆုံးဒေသမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျောက်ဖြူ အခြေစိုက် ဓည၀တီ ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများ၊ ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ (၅၄၂)၊ (၅၄၃) တပ်ရင်းများနှင့် တခြားမြို့နယ်များရှိ တပ်ရင်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည်လည်း သီးစားစနစ်ဖြင့် ပိုင်ရှင်လယ်သမားများကို လယ်လုပ်ခွင့် ပေးကာ တဧကလျှင် ၁၅ တင်းအထိ ပေးဆောင်ရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“စစ်တပ်က ရခိုင်မှာသိမ်းတဲ့ အထဲမှာ ဥပမာ – ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ၀င်းမြင့် သမီး နာမည်ပေါက်နေတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်မောင်သန်း သမီး နာမည် ပေါက်နေတာတွေက မူလပိုင်ရှင်တွေ ပြန်ရဖို့ ခက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ပထမဆုံး သိမ်းတဲ့သူတွေကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ဦးဘရှိန်က ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀ှမ်း၌ စစ်တပ်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက သိမ်းထားသည့် လယ်မြေများ၊ ဥယာဉ်ခြံမြေများ၊ နွားစားကျက်မြေများ စသည်ဖြင့် အမှုပေါင်း အများအပြား ရှိနေသေးသော်လည်း မူလပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း၊ တန်ရာတန်ကြေး လျှော်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ခြင်း ရှိ မရှိတို့ကို စောင့်ကြည့်ရဦး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသများမှ လယ်သမား အများအပြားသည်လည်း ထိုသို့ရင် ဆိုင်နေရ၍ လယ်သမားတို့၏ဘ၀ တိုးတက်ရေးကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် အလေးပေး ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးမှ တောင်သူလယ်သမားတို့သည် မိမိတို့ လယ်ယာမြေများကို အဓမ္မသိမ်းယူခံရခြင်း၊ မိမိတို့ လယ်မြေကို သီးစားခ စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးစရိုက် မလုံလောက်၍ အထွက်းနှုန်း လျော့ကျကာ ကြွေးတင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ထိုအကြွေးများ ကြေရန် “အကြွေးတွေ ကျေဖို့အတွက် လယ်သမားတွေ တနေ့ ထမင်းတနပ်ပဲ စားကြပေါ့” ဟု လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးမြင့်လှိုင်က ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်းမှ လယ်သမားများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုသွား၍လည်း လူအများ၏ ဝေဖန်ခြင်းကို ခံနေရသည်။
ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီကို ဒေသခံများ တရားစွဲမည်
လယ်မြေ သိမ်းဆည်မှုများ ဥပဒေနှင့် မညီကြောင်း ဆက်လက် ဖော်ထုတ်
ရခိုင်တွင် ညမထွက်ရအမိန့် အချိန်ကန့်သတ်မှု လျှော့ချ
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အဆို ကန့်ကွက်ခံရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Linyone February 1, 2013 - 7:36 am	No matter what! Endless lawsuits are on their way to Nay Pyi Taw. Unless the people receive fair compensations, the problems will never cease. If the Burmese lawyers cannoy help, it can even jump the ocean and bring in western lawyers. Global village is now smaller thanaball inasmall boy’s hands. Too much problems does not mean unsolvable. It will bring bunch of cash for lawyers and it is good.
မတရား မြေသိမ်းမှု ရန်ကုန်မြို့ ၃၅ ဆခန့် ကြီးမားဟု ဆို
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တဦး သိမ်းယူထားသည့်မြေများ ပြန်ရရန် ဒေသခံများ တောင်းဆိုမည်
စစ်အစိုးရ လက်ထက် မြို့သစ်စီမံကိန်း လယ်ယာမြေ လျော်ကြေးများပေးရန် ကျန်ရှိ
မြေယာ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများ ဆက်ရှိနေဦးမှာလား
ပြည် နဝဒေး စီးပွားရေးဇုန်အနီး မြေကွက်များသိမ်းယူမှု ဒေသခံများ မကျေနပ်
ပန်းတောင်း၌ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လယ်မြေများ ဗိုလ်ချုပ်များ အမည်ပေါက် ဖြစ်နေ
ကန်ကြီးထောင့် အများပိုင်မြေကွက် အတွက် အာဏာပိုင်နှင့် ဒေသခံများ ပြဿနာဖြစ်နေ
ကန့်ဘလူ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် တောင်သူများ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံနေ